भूकम्प प्रभावित महिलालाई युन वीमेनको राहत
महिला खवर काठमाडौं, वैशाख २३। यून वीमेनले भूकम्प प्रभावित ५ वटा जिल्लाका महिलालाई अति आवश्यक लत्ता कपडा वितरण गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक,काभ्रे, नुवाकोट, काठमाडौं र गोर्खाका महिलाले नेतृत्व गरेका परिवारलाई लक्षित गरि सामग्री वितरण गरिएको यु न वीमेनले जनाएको छ।यी ५ जिल्लामा २ हजारलाई यी सामग्री दिइने छ। जिल्लास्थित महिला बालबालिका कार्यालय र अन्य साझेदारसँग समन्वय […]
गुफाका महिला भन्छन् : सरकार पठाईदिनुस् है
सिन्धुपाल्चोक (गुफा), वैशाख २३ । सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम गाविस ज्यामिरे–८ गुफाका महिलाले सरकार पठाई दिन आग्रह गरेका छन्।
भूकम्पले क्षती पुर्याएको १२ औं दिनसम्म पनि गुफामा सरकारको
घाइतेलाई खाना खुवाउन महिला सक्रिय
पोखरा, वैशाख २३ । वैशाख १२ गतेको महाभुकम्पबाट घाइते भई अस्पतालमा उपचार गराइरहेकालाई खाना खुवाउन महिला सक्रिय भएका छन्।
भूकम्पका कारण घाइतेको उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका बेड पुरै
कसरी भो ‘मिराकल बोइ’ को प्राथमिक उपचार? एउटी नर्सको बयान
प्रहरीले माटो पुच्छ्दै ल्याएका सोनितलाई सफा गरेपछि सलमा राखेर आमालाई दियौं। २२ घण्टासम्म घरभित्र पुरिएको बच्चाले दुध खान्छ वा खाँदैन् भन्ने चासो थियो। चौरमा लगेपछि उसले आमाको दुध आनन्दसँग तान्यो, मैले भगवानलाई पटक पटक धन्यवाद दिएँ।
प्रसूती गृहमा रातो स्टीकरः सुत्केरी जति भूइँमा
ललितपुर, वैशाख २२। कपनकी दुर्गा गौतम अहिले थापाथलीको प्रसूती गृहको भुइँमा पल्टिरहेकी छन्। जेठ २ गते सुत्केरी हुने मिति डाक्टरले दिएपनि उनले वैशाख २१ गते नै बच्चा जन्माइन्। भनिन् ‘झण्डै भूकम्प मै परिन। त्यो वेला भएको भए यो भुइँ पनि नपाइने रहेछ।’
अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले संरक्षण पाउने
काठमाडौँ, वैशाख २२ । बालबालिका निम्ति गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र बालगृहहरूको महासङ्घले भूकम्पबाट अभिभावकविहीन बनेका पाँच सय बालबालिकालाई काठमाडौं र अन्य सहरमा संरक्षण दिने जनाएका छन्।
राहत बाँड्न जाँदै हुनुहुन्छ? केही पोषिलो खानेकुरा र सेनिटरी प्याड पनि लैजानुस् है!
ललितपुर, वैशाख २२ । वैशाख १२ को भूकम्पले देशैभरी जनधनको ठूलो क्षति भयो। धेरै मानिस विपद्मा परे। उनीहरुको पीडा घटाउन राहत वितरणका अभियान पनि चलिरहेका छन्। चितवनको गाउँ विकास युवा क्लबले पनि भूकम्प पीडितका लागि राहत संकलन गरेको थियो। पश्चिम चितवनमा संकलित राहत सामग्री लिएर धादिङ शुक्रबार जाँदै थियौं।
सुजाता कोईरालाले ११ जिल्लामा घर वनाईदिने
विराटनगर, वैशाख २१। आफ्नो स्वर्गीय पिता पुर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको स्मृतिमा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोईरालाले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका ११ वटा गाँउमा घर वनाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ।
चौँरीगाई चराउन गएकी गर्भवती महिलाको दश दिनपछि उद्धार
दोलखा, वैशाख २१ । चौँरीगाई चराउन जङ्गल गएकी एक गर्भवती महिलाको विनाशकारी भूकम्प आएको दश दिनपछि उद्धार गरिएको छ ।
दोलखाको गौरीशङ्कर गाविसकी ती गर्भवती महिलाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सोमवार उद्धार गरिएको हो । जङ्गलमै अलपत्र परेको
गुडीरहेको वसमा बलात्कार गर्ने आरोपी पक्राउ
झापा, वैशाख २१। महाभूकम्पको पछि त्रासले काठमाडांैबाट पाँचथर फर्कीरहेकी एक युवतीलाई गुडिरहेको बस भित्रै सामूहिक बलात्कार गर्ने दुइ युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौंवाट झापा आएको ना.वा. ख ७२४२ नम्वरको निशाना डिलक्स
« Previous 1 … 766 767 768 769 770 … 773 Next »